AMBATO-BOENY : Notetehin’ny dahalo ny filohan’ny dina sy ny vadiny
Nokapaina famaky ny lohany sy ny faritra ao amin’ny lamosiny, notsindromina tamin’ny antsy ny kibony fa nisolifatra. Notifirina ka ny teo amin’ny sandriny roa no voa. 13 septembre 2017
Ny alin’ny alatsinainy tamin’ny 9 ora alina dia nisy andian’olona tonga tao amin’i Tovondraoka, filohan’ny dina, mipetraka ao amin’ny fokontany Ambohimarina, kaominina Ambato-Boeny saingy eo amin’ny 20 km eo ho eo miala ny tampon,-tanàna.
Niantso vonjy ireo olona ireo nilaza fa lasan’ny dahalo ny ombiny. Vao nivoaka ny filohan’ny dina dia notsolivin’izy ireo ny masony ary jambena. Tifitra, daroka ary tetika no nahazo azy. Voamariny kosa fa enin-dahy ireo dahalo. Tafandositra ihany izy avy eo ary niafina tany anaty ala. Ny vadiny kosa no novantanin’ireo dahalo, tsy nananany antra fa dia nokapakapainy ary namoy ny ainy. Lasan’ireo dahalo ny vola 35 tapitrisa ariary sy ny basy.
Notsaboina tao amin’ny dokotera tsy miankina aloha io filohan’ny dina io, saingy tsy maintsy nentina aty Mahajanga hanaraka fitsaboana fa misy bala tsy afaka amin’ny vatany. Nanofa fiarakodia izy sy ny fianakaviany ho any Mahajanga.
Mbola nafenina azy kosa fa maty ny vadiny.